पेट्रोलको मूल्य घट्यो | सुदुरपश्चिम खबर
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १ रुपैयाँ घटाएको छ । निगमले बुधबार रातिबाट लागू हुने गरी मूल्य घटाएकाे हाे । मूल्य घटेपछि बिहीबार बिहानबाट काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोल १ सय १० रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बिक्री हुनेछ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको ५० कित्ता सबैलाई पर्ने आइपिओ खुल्ने मिति
यसअघि पेट्रोलको मूल्य १ सय ११ रुपैयाँ प्रतिलिटर थियो । आयल निगमले १५ जेठमा बजेट आउनासाथ पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्यमा प्रति लिटर १ रुपैयाँ ५० पैसा वृद्धि गरेको थियो । बजेटले पेट्रोल र डिजेलमा पूर्वाधार कर बापत १ रुपैयाँ थपेपछि मूल्य बढाएको निगमले तर्क गरेको थियो ।
तर, चार दिनअघि भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट पेट्रोल, डिजेलको मूल्य घटेर आएपछि नेपाली बजारमा घटाइएको निगमको कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘आइओसीबाट केही मूल्य घटेर आएका कारण नेपाली उपभोक्तालाई राहत हुने गरी मूल्य समायोजन गरिएको हो’ उनले भने ।
सुदुरपश्चिम मोबाइल ब्यवसायी संघ आधिकारिक रुपमा दर्ता
फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा वृद्धि !!
विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढ्दै :घट्न थाल्यो ग्याँसको आयात !!
बैतडीमा एक करोड बढीका हिउँदे फलफूलका बिरुवा विक्रि
‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर, नखाएको विष लाग्यो’
इन्डो–प्यासिफिक रणनीति किन तानिँदै छ नेपाल?